सेयर बजार - Sano Aawaj
मालामाल बनाउने अर्काे लघुवित्तकाे आईपीओ निष्कासन हुँदै(पुरा पढ्नुहोस्)
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, सेयर बजार
नेपाली सेयर बजारमा एकपछि अर्को कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर जारी गरिरहेको बेला आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । सो लघुवित्त ६० हजार कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ । लघुवित्तले ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ६० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि असोज २० गते बोर्डमा आवेदन दिएको छ । लघुवित्तको गत असार ३१ गते सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारण सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। लघुवित्तको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बिओके क्यापिटल रहेको छ। बोर्डबाट अनुमति पाएसँगै लघुवित्तले सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । ...
१७ कार्तिक २०७८, बुधबार१७ कार्तिक २०७८, बुधबार१७ कार्तिक २०७८, बुधबार by sanoaawajNo Comments
छुट्ला है! फेरी एउटा राम्राे कम्पनीकाे सेयरमा लगानी गर्ने अवसर आउँदैछ
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, ताजा अपडेट, सेयर बजार
अरुण काबेली पावर लिमिटेडले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । त्यस क्रममा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गलाई नियुक्त गरेको हो । त्यस अनुसार अरुण काबेली पावर लिमिटेडले निष्काशन गर्ने शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नविल इन्भेष्टमेन्टले गर्नेछ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीले शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाबीच भइ बग्ने काबेली नदीमा २५ मेगावाटको काबेली बि १ जलविद्युत आयोजना निर्माण पुरा गरी २०७६ कार्तिक २३ गते देखि व्यवसायिक उत्पादन गरिरहेको छ ।...
तिहारपछि आउँदै मालामाल बनाउने धेरै राम्रा आईपीओहरु, यी हुन तिहारपछि आउन लागेका आईपीओहरु
Breaking news 1, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, सेयर बजार
तिहारपछि ठूलाे संख्यामा आपीओहरु निष्काशन हुने भएका छन् । बजारमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) आउने तयारीमा छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा २२ वटा कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिको पाइपलाइनमा छन् । सर्वसाधारणलाई सेयरधनी बनाउन संस्थाबाट सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरी सेबोनको अन्तिम स्वीकृतको पाइपलाइनमा १२ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी, ६ वटा माइक्रोफाइनान्स संस्था, २ वटा बीमा कम्पनी र २ वटा अन्य समूहका कम्पनी छन् । यी कम्पनीका ५ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड २८ लाख १२ हजार ८९४ कित्ता आइपीओ जारी गर्नका लागि २ वर्ष अघिदेखि स्वीकृतिको पर्खाइमा बसेका हुन् । केही महिनाअघिसम्म समय सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयरमूलयमा उच्च वृद्धि थियो । तर, धितोपत्र बोर्डले ५१ वटा कम्पनीमा लगानी जोखिमयुक्त भन्दै सूची सार्वजनिक गरेपछि हाइड्रोपावर कम्...
साेझा नेपालीलाई आइपीओ भराएर एउटा कम्पनी भाग्यो, तपाईकाे लगानी पनि डुब्ला है थाहा पाईराख्नुस
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, सेयर बजार
पछिल्लाे समय कुनै आईपीओमा आम मानिसकाे आकर्षण बढ्दाेछ । जुन सुकै कम्पनीको आइपीओ खुले पनि लगानीकर्ताहरुले आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने गरेका छन् । कम्पनीकाे बारेमा बुझ्दै नबुझी आईपीओ त हाे भन्दै लगानीकर्ताहरुले आइपीओमा आवेदन दिने गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय केहि कमजोर आंकलन गरिएका र विवादित कम्पनीमा आइपीओ भर्नेको संख्याले पनि यो तथ्यलाई पुष्टी गर्दछ । तर इतिहास हेर्ने हो भने चीनबाट नेपाल भित्रिएको एक कम्पनी नेपालमा आइपीओ खुलाएर भागेको समेत छ । २०४९ सालमा चीनबाट नेपालमा औसधि कम्पनी कम्पनीमा लगानी गर्न आएको कम्पनी अन्तत नेपालीहरुलाई डुबाएर भागेको हो । यो घटनाको नालेबेली पत्ता लगाउन २०४६ सालमा फर्किनुपर्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछी नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुन पारित भएपछी चीनको सेफ रिच इन्ड्रष्टी लिमिटेडले १९ करोड ५४ लाख रुपैयाँको लगानीमा नेपालमा औषधी उद्योग ...
सामलिङ्गकाे आईपीओ बाँडफाँड सुरु, २२ लाखको हात रित्तो, हेर्नुहोस् यसरी रिजल्ट
Breaking news 2, Nepse Update, ट्रेन्डिङ, सेयर बजार
लाखाैँले नतिजा प्रतिक्षा गरिरहेकाे सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपीओ बाँडफाँड सुरु भएको छ । निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्गकाे कार्यालयमा बिहान ८:३० बजेबाट बाँडफाँडकाे कार्यक्रम सुरु भएकाे छ। कम्पनीकाे आईपीओमा अन्तिम दिन सम्ममा २२ लाख ६५ हजार ६ सय ९८ जना आवेदकहरूले २ करोड ६९ लाख ३३ हजार ५ सय कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । याे सर्वसाधारणका लागि माग गरिएकाे भन्दा ३९.६७ गुणा धेरै हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँ अंकित दरमा ७ लाख ३० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ६ सय कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३६ हजार ५ सय कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको थियाे । सर्वसाधारणले बाँकी ६ लाख ७८ हजार ९ सय कित्ताका लागि आवेदन दिन ...
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सकाे सेयर पाएकाहरु पनि मालामाल
Breaking news 2, breaking news 3, सेयर बजार
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (JLI) ले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ५.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ। कम्पनीको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मुनाफाबाट १०.५२ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमध्ये ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ । प्रस्तावित लाभांश बीमा समितिबाट स्वीकृत भएपछि र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीले पाउनेछन् । प्रस्ताव अनुसार लाभांश स्वीकृत भएमा कम्पनीले ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर तथा १२ करोड १५ लाख ७८ हजार ९४७.३७ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्नेछ ।...
नबिल बैंकको सेयर पाएकाहरु मालामाल, अपत्यारिलाे नाफाले प्रतिसेयर आम्दानी यति धेरै
Breaking news 1, Nepse Update, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, सेयर बजार
नबिल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित वित्तिय विवरण अनुसार समिक्षा अवधीमा बैंकको मुनाफामा सामान्य बृद्धि आएको देखिन्छ । उक्त विवरण अनुसार समिक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा बैंकले १ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.३९ प्रतिशतले बढि हो । गत वर्षको यही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म बैंकको सञ्चालन मुनाफा पनि ७.१३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ५८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा बैंकको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब ४८ करोड ३० लाख रूपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी, पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि ४२.४१ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब २४ करोड १५ लाख ...
breaking news 3, Nepse Update, ताजा अपडेट, सेयर बजार
सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको साधारण शेयर (आईपीओ) बाँडफाँट मंगलबार हुने भएको छ । कात्तिक ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म आवेदन खुला भएको आईपीओ मंगलबार बाँडफाँट गर्ने मिति तय भएको कम्पनीको शेयर निष्कासनको बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।आईपीओ निष्कासन गरेको गरेको थियो । कुल निष्कासित शेयरमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ५०० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोष र दुई प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ६०० कित्ता शेयर कम्पनीको कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ । त्यसबाहेकको ६ लाख ७८ हजार ९०० कित्ताका लागि शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिएका छन् । कम्पनीको आईपीओमा ३९.६७ गुणा धेरै अर्थात २२ लाख ६५ हजार ६९८ वटा आवेदन परेको थियो । दुई अर्ब ६९ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दुई करोड ६९ लाख ३३ हजार ५०० कित्ताका लागि आव...
१००० हाेईन, ५ सय रुपैयाँमै १० कित्ता भर्न मिल्ने नयाँ आईपीओ आउँदै
Breaking news 2, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, सेयर बजार
हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई नियुक्ति गरेको छ । कम्पनीली सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्न बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति गरेको हो । आइतवार कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ढकाल र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणी ढकालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले कुल १४ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको २९ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसैबीच एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा आज शुक्रबार दिउँसो साढे १५ प्रतिशतमात्रै सब्सक्राइब्ड भएको छ। यो बैंकले गत असोज २५ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ। MORE COOL STUFFAdskeeper Ready To Shop? These A...
१४ कार्तिक २०७८, आईतवार१४ कार्तिक २०७८, आईतवार१४ कार्तिक २०७८, आईतवार by sanoaawajNo Comments
छुटेकाे त छैन् ? सेयरका लागि आवेदन दिने समय थप गरियाे
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले असोज २५गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने म्याद थप भएको छ । अब बैंकको हकप्रद शेयरमा लगानीकर्ताले अब कात्तिक २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने भएका छन्। बैंकले हाल कायम १० कित्ता शेयर बराबर नयाँ ३ कित्ता शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको हो। यसअनुसार बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित दरका २४ करोड ३३ लाख ३६ हजार ३६७ रुपैयाँ बराबरको २४ लाख ३३ हजार ३६३.६७ कित्ता हकप्रद जारी गरेको हो। हकप्रद निष्काशनका लागि बैंकले असोज १ गतेदेखि शेयर दाखिला खारेजी (बुकक्लोज) गरेको थियो। यसअनुसार भदौ ३१ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम यस बैंकका शेयरधनीहरुले मात्र उक्त हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन्।...